Ogaden News Agency (ONA) – HALGAN HORUMARAY, HANTIDIISA KAASHADAY HAMBALYAANU LEENAHAY – Xaaji Maxamed Aw Macalim
HALGAN HORUMARAY, HANTIDIISA KAASHADAY HAMBALYAANU LEENAHAY – Xaaji Maxamed Aw Macalim
Posted by ONA Admin	/ December 17, 2013
Halgamaaga ogadeniya waxaan leeyahay- haday galab kuu tahay galab wanaagsan, haday subax kuu,tahayna subax wanaagsan.
Waxaan qorayaa maqaal gaaban balse wax tusaaleeya. Waxaa fahmi doona maqaalkan qof kasta oy ku jirto dhibic wax garad ah, xaataa haduu damiin yahay akhristuhu waxaan siinaynaa sharaxaad uu wax ku fahmi karo ee ha u dulaqaato akhriskan gaaban.
Waxaa ka bilowday Ogadeniya 1994 halgan ku bilowday qaab is difaac ah kadib markii ay ku duuleen ciidamada tigreegu dhamaan xarumihii JWXO iyo madaxdii jabhada iyagoon kafiirsanin. Safafka hore waxaa kadagaalamayay Qabiilka Tigreega.
Mudo kadib waxay Tigreegu bilaabeen inay sameeyaan dib u garasho waxyna iska soo hormariyeen maleeshiyaadkii kale ee qowmiyadaha Itoobiya. Tigreeguna waxay isu badaleen inay amarka bixiyaan oo kaliya. Mudo kadib dhamaan ciidamadii itoobiya ayaa wadi waayay dagaalkii. Waxaa lakeenay fikir kale oo odhanaya aynu sameyno ciidamo soomaali ah iskuna jabino lafahooda. Kuwii watay magaca soolmaaliddu muday laftoodu dagaal kusoo jireen, balse waxay bilaabeen eega inay iska dhiibaan xeryaha ku yaala Kenya, Yaman Jabuuti iyo meelo kale. Waxay duruurftu ku kaliftay inay umadii ay halkaas iyagu uqixiyeen waydiistaan cafis iyo martigaliyo. Waxaan xauusinayaa akhristayaasha labadan eray oo uu sheegay abwaan hore.
17 GU YUU NABSIGU SOO TUXLAYN JIRAYE, HAATANA TUKAHA WAAQLEBAA TAW LASOO ODHANEE.
Marxaladda eega lamarayo ayaa ah in baabuurtii Uraalka ahayd ee kolkii horaba tabcaanka la ahaa Daxalka si isdaba jooga loo gumaado. Waxaa si sahlan lagu fahmi karaa geerida ciidamadoodu inay tahay raxan raxan, yaase uga turi doona? Waxaa hadalkan makhraati u ah inay diideen wariyayaasha caalamku inay cagta soo galiyaan goobaha dagaalka iyagoo kabaqaya inay ceebi karaacdo. Sidaa daraadeed, halgan horumaray oo hantidiisa kaashaday hambalyaanu leenahay. JWXO kama helo dhaqaale UNka, IMF iyo Jaamacadda carabta midna. Waxaa Alle u barakeeyay hantidooda xalaasha ah.
Kulanka ay ugu magacdareen qowmiyadaha ee ka dhacay JIGJIGA ayaan ka helay waayo argnimo balaadhan oo itoobiya waxay igu ahayd maqal mana jirin aqoon fiican oon ulahaa. Waxaan maqli jiray islaan la odhan jiray Dhagdheer oo dad qalato ah. Hadayba jirtay waxaan filayaa inay ahayd Itoobiyaan. Hadaad dib u jaleecdaan kulankii ma arkayseen balaayo qooldaamo wadata, balaayo birqalax wadata, balaayo madax doofila leh, balaayo ilko qorqoran, balaayo suntan, balaayo qaawan iyo balaayo dacayda wada laalaadinaya ood moodo Awr koramo ah oo banjoog ah. In taasoo balaayo ah iyo umad Alle iyo Rasuul taqaana oo Ahlu kheyr ah waxba kama dhaxeyn karaan.
Gabagabdii waxaan leeyahay qofkii maleeya inay halgankani qaab sahlan iyo iskasoo xarooda ku joogsan doono waa hurdaa.
Iskusoo wada duuboo, sunnadda ilaahay jideeyay ee loogu talogalay aduunkan ayaa ah- in cid kasta oo dadaasha gaal iyo muslim kuu doono ha noqdee uu gaadhayo hadafkiisa.
Xaaji Maxamed Aw Macalim